Akwụkwọ Nick Carter na Martech Zone |
Edemede site na Nick carter
Ihe karịrị 90% nke obere azụmaahịa na-eji ụfọdụ ụdị dijitalụ nke njikwa data iji chekwaa kọntaktị, ọ dị ka ọ pụtara na obere azụmaahịa abanyela na afọ dijitalụ. Mana, anyị chọrọ ịma ihe obere azụmaahịa ndị a na-eji data kọntaktị. Ihe anyị chọpụtara nwere ike iju gị anya. Nwere ike ịchọta nsonaazụ nyocha zuru ezu na Mahadum AddressTwo.
Kemgbe m tụtụchara akwụkwọ @ kyleplacy na nke @ edeckers "Edepụtara Onwe Gị" amalitere m ịkọle mkpebi m mere n'oge m ka na-eto eto. Afọ ndị gara aga, m kere mmadụ aha ya bụ Addy. Ọ bụ akụkụ nke ngwanrọ ahụ, mana karịa nke ahụ, ọ bụ onye kachasị aka na-enyere ndị ahịa anyị aka. Ebum n’uche bu ka ndi mmadu tinye ya na AddressTwo abuo karie nke m. Ọ na-arụ ọrụ. Na taa, M
Amaara m na m nwere ike ijide ụfọdụ maka ihe a, mana abughi m onye ofufe Mac. Ọ dị mma, m doro anya na enweghị m ike iguzo ha. Enweghị m ike itinye mkpịsị aka m na ihe kpatara ya, mana nke a bụ mbido: iji zụlite App maka iPhone dị ebube, ị ga-etolite naanị na Mac nwere ngwanrọ Mac-ntinye ego karịrị $ 2,000. Ka o sina dị, iPhone bụ onye na-agbanwe ahịa na ahịa azụmaahịa nke azụmahịa ga-eburu. Yabụ, gị
M na-atụ ụjọ na enweghị m ozi ọhụụ m ga - eso ndị na - agụ ya Martech Zone, naanị arịrịọ maka enyemaka gị. Mgbe ịlechara vidiyo dị n'okpuru ebe a, biko: Gwa m ma ọ bụrụ na enwere ụfọdụ ọrụ-na nke a nke m tụfuru, ma ọ bụ …Righarịa ọnọdụ a ruo mgbe mkpịsị aka gị na-agba ọbara ka ọ na-adọrọ uche mmadụ na Facebook [youtube: http: //www.youtube.com/watch? v = 5G-90bZXVjw]
N'oge na-adịbeghị anya, m na-ewepụta ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ. Dika Address abuo toro ma oge m atugo, o meputara oke mmiri ozuzo nke echiche ohuru na oge efu iji mezuo, ya mere azutara m otutu ngalaba ma mejuputa micro-saiti aka ekpe na aka nri. N’ezie, enweghi m ndidi. Enwere m echiche na Mọnde, wulite ya na Tuesday, Achọrọ m ịzụ ahịa na Wednesday. Mana o nwere ike iwe ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ izu tupu nke ọhụrụ m